Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish yakatoburitswa | Kubva kuLinux
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish yakatoburitswa kare
Mushure memwedzi mitanhatu mairi zvakatora kuvandudza kwayo Ubuntu 18.10 yapera uye inowanikwa mahara kurodha pasi uye neizvi kunouya kuvandudzwa kutsva kwakaitwa mukati memwedzi iyi, kwete chete musimboti asiwo zvimwe zvinhu zvehurongwa kusvika parizvino.
Ubuntu 18.10 Inguva pfupi kuburitswa nemwedzi mipfumbamwe chete yekutsigirwa sezvo maX.10 vhezheni ari ekungochinjika umo mamwe maratidziro akavandudzwa uye iyo sisitimu inowedzerwazve kugadzira nzira yeimwe ine kugadzikana kukuru, zvichikonzera mune x.04 shanduro.
Iyo yazvino vhezheni yeUbuntu iri pano uye inouya neakawanda mabasa ekuvandudza, pamwe nekugadziriswa kwebug uye software inogadziridza yeiyi inozivikanwa Linux inoshanda system.
Pakati peimwe shanduko, Ubuntu 18.10 inoshandisa Linux kernel 4.18 iyo inopa kutsigira zvirinani kweThunderbolt 3 uye USB Type-C chiteshi, rutsigiro rwe AMD Radeon Vega M mifananidzo, uye kutsigira zvirinani kweRaspberry Pi 3B uye 3B +.
Iyo inoshanda sisitimu inotsigira akasiyana madesktop enharaunda, asi default vhezheni ye Ubuntu ikozvino inosanganisira kuburitswa kwazvino kweiyo GNOME desktop nharaunda inova yayo vhezheni 3.30 iyo yakaburitswa mwedzi wapfuura.
0.1 Nhau huru muUbuntu 18.10
0.2 Kuisirwa uye chirongwa kutanga kuri kukurumidza.
1 Dhawunirodha Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
Nhau huru muUbuntu 18.10
Iyi itsva vhezheni yeUbuntu linouya nechitarisiko chitsva, iyo yakanga yakarongerwa vhezheni 18.04 LTS asi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana shanduko iyi haina kuitwa kudzamara iyi vhezheni itsva.
Iko kutaridzika uye kwakatariswa-kutaridzika ndiko kunokwevera kutarisisa kwetimu nyowani inosanganisirwa muUbuntu 18.10, iyo inonzi Yaru uye zvakare inosanganisira zvidhori zvitsva, inogadzirisa mavara ari padivi uye mumahwindo, uye inoita kuti Gnome desktop iwedzere kunge yazvino
Dhizaini dhizaini inozivikanwa kwazvo, inotaridzika zvirinani, asi iwe unogona kukakavara nezve ruzivo uye ndizvo izvo nharaunda yeLinux inoda kuita. Naizvozvo, matsva matsva haana yunifomu kune iyo sisitimu, izvo zvinonetsa kuita pamwe neakawanda software timu.
Kuisirwa uye chirongwa kutanga kuri kukurumidza.
Ubuntu 18.10 inoita chaizvo izvo vashandisi veWindows vanoda, inovandudza mashandiro. Cosmic Cuttlefish inoshanda nekukurumidza munzvimbo zhinji, semuenzaniso, nekuda kweiyo nyowani yekumanikidza algorithm, inoisa nekukurumidza.
Vagadziri vakagadziridza zvakare kuvhurwa kwezvirongwa zvakagara zvaiswa. Iyo bhatiri iri muKernel inofanira zvakare kuona kuti Ubuntu 18.10 inogara kwenguva yakareba pama laptops.
Ubuntu 18.10 inouyawo neFirefox 63, LibreOffice 6.12, uye boka remamwe maapplication akagadziridzwa akaiswa-pamberi.
Asi zvakazara, ichi chiitiko chine mwero pamusoro peUbuntu 18.04, inova iyo LTS (rutsigiro-rurefu-rutsigiro) vhezheni yeiyo inoshanda system yakaburitswa kutanga kwegore rino.
Iko hakuna chaiko kwakanyanya shanduko huru kune makuru maapplication kana maficha uye mazhinji eanogadziridza maapp anowanikwa kune vashandisi veUbuntu 18.04 izvozvi zvave kuwanikwa seSnap mapakeji.
Saka kana iwe usingade iyo yakavandudzwa rutsigiro rwehardware kana mashandiro ekuita anouya nemamiriro edesktop uye nekernel kugadzirisa.
Panogona kunge pasina zvikonzero zvakawanda zvekumisikidza, kunyanya sezvo Ubuntu 18.04 ichizotsigirwa zviri pamutemo kusvika kutanga kwa2023, nepo Ubuntu 18.10 chete inogamuchira mwedzi gumi nemana yekugadziriswa kwekuchengetedza, ichizopera pakati pa9.
Dhawunirodha Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
Pakupedzisira, kune avo vese vanoda kugona kuwana uyu mutsva mufananidzo weiyo system uye isa ino kugoverwa kweLinux pamakomputa avo kana ivo vanongoda kuyedza iyo system pasi pemuchina chaiwo.
Iwe unongofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yekugovera uye muchikamu chayo chekuburitsa unogona kuwana iyo system mufananidzo.
Izvo zvakakoshawo kutaura izvozvo mamwe ese ehunyanzvi eUbuntu flavour aburitswa Pakati pedu patinogona kuwana shanduro nyowani dzeUbuntu MATE, Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu kylin uye Ubuntu Studio.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish yakatoburitswa kare
Vanonamata havadi Ubuntu ... pachezvangu ndinofunga inzira yakanaka yekushandisa, ndanga ndichiishandisa kwemakore mumatte vhezheni yayo (ini handidi gnome3) uye vese Debian neUbuntu, kwandiri, zvinoshanda zvakanyanya uye ichiita mabasa akawanda.
Gonzalo Montes de Oca akadaro
Ini ndinoda Linux Mint nekureruka kwayo
Pindura Gonzalo Montes de Oca
Zvakanaka, kwenguva, ndiri kugara neVoyager 18.04 uye yakavhurikaSUSE 🙂
Mbed Linux OS itsva ARM system yeinternet yezvinhu
HAT Tv: new hardware yekuwedzera yeiyo Raspberry Pi